पानीजहाज पानी बाधा द्वारा विभाजित भूमि क्षेत्रहरू बीच परिवहन प्रदान गर्नुहोस्। यो असम्भव वा त्यसो गर्न अव्यावहारिक छ विभिन्न कारण एक पुल निर्माण गर्दा सामान्यतया यो हुन्छ। को पार यात्रु को गाडी को लागि मात्र होइन काम गर्न सक्छन्। यसमा माल, सडक र पनि रेल परिवहन को आन्दोलन संगठित गर्न सम्भव छ।
धेरै यात्रु आफ्नो कार मा यात्रा गर्न विष छन्। यस द्वीप र पनि नौका द्वारा महादेशमा बीच Strait वा समुद्र हटाउन। नजिक पङ्क्तिहरू मा तल्लो डेक मा सुरक्षित पार्क र वाहन सुरक्षित छन्। एकै समयमा आफ्नो मालिक आराम माथिल्लो स्तर मा सवारी आनन्द।
नौका अक्सर मोटरबाटो वैकल्पिक यात्रा चयन र कसरी। विशेष गरी तपाईं धेरै सीमानाहरू पार गर्न भने। को चौकियों को छालहरू मा rocking गर्न सकिन्छ मा लाइनहरू खडा गर्न क्रममा, सुरुचिपूर्ण नौका मा सजिलो आराम। यातायात, प्रभावकारी हुन परिवहन कम्पनीहरु एक संयुक्त नौका प्रयोग गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई को भन्दा 200 मीटर को एक विशाल लम्बाइ छ। तिनीहरूलाई वाहन लागि सडक खण्डहरू को कुल लम्बाइ4भन्दा बढी किलोमिटर हुन सक्छ, र तिनीहरूले डेक 10-12 मा अवस्थित गर्न सकिन्छ। एकै समयमा, अधिकतम पूर्ण लोड मात्र 1.5 घण्टा छ।
दुई बैंकहरू बीच परिवहन संगठित गर्न सबैभन्दा सरल तरिका मा, तपाईं एक साधारण डुङ्गा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो यात्रु वा ओभरसाइजगरिएको कार्गो बोक्न सक्छ। धेरै डुङ्गा एक साधारण फर्श द्वारा सँगै सामेल एक कार सामना गर्न सक्छन्। संचालित यस्तो अस्थायी साधन प्रयास rower वा इन्जिन शक्ति सक्छन्। यस मामला मा यो आत्म-चालित नौका को बोल्न चलनअनुसारको छ। दुई बीच विपरीत पक्ष मा अंक डोरी (डोरी, चेन) फैलयो र सामान उचाल्ने यंत्र र एक ब्लक उपकरण स्थापना गर्न सकिन्छ। डोरी वाटरक्राफ्ट को नि: शुल्क अन्त गर्न तोकिएको निश्चित मार्ग उत्प्रेरित गर्नेछ, र भूमि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
दुई पक्ष को कोर्ट वा pontoons द्वारा बाहिर बीच ठूलो दूरी गर्न नौका क्रसिंग। सबै भन्दा लोकप्रिय संयोजन जहाज, बोर्ड मा एक कार्गो, सडक र रेल परिवहन लिन सक्षम, यात्रु। डिजाइन आफ्नो ramps मा कि पानीजहाज मान्छ। लोड र ओराल्नको नाउ को अंक सामान, यात्रु र वाहन को छिटो र सजिलो आन्दोलन लागि बसोबास गर्दै छन्, संगठित पहुँच सडक, मञ्चहरूमा, ramps, र अन्य सहायक संरचना।
Kerch सागर डुङ्गा: काम विशेषताहरु
यो परिवहन मार्ग पुरातन समयका अस्तित्व। मार्ग को क्रस , Kerch Strait को नजिककालागि बिन्दुमा, Azov समुद्रको बताइरहेका। क्राइमन र क्रास्नोडार किनारा बीच दुई बैंकहरू प्रायद्वीप अलग पाँच मात्र किलोमिटर दूरीमा छन्। 30 मिनेट - यसरी आधुनिक यात्री नौका 20 overcomes।
परिवहन लिंक घडी वरिपरि स्थापित। तर यो मौसम फरक छ कि हुन्छ। यस मामला मा, नौका वास्तविक पूर्वानुमान मा सञ्चालन। कुनै न कुनै समुद्र मा नौका प्लाई छैन। सामान्य अवस्थामा, एक नौका प्रति दिन 30 उडानहरू सम्म वहन।
प्रयासहरू पनि Strait असफल थिए मार्फत एक पुल निर्माण गरिएका छन्। बलियो gales र बरफ आन्दोलन गाह्रो परियोजनाहरू। सोभियत समयमा, यस पानीको साघुरो भाग परिवहन मात्र होइन यात्रु र वाहन मार्फत बाहिर। केही अवधि मा, प्रबन्ध र विशेष कोर्ट द्वारा रेलवे माल र यात्री कार पारित भएको थियो। Strait सबैभन्दा ठूलो गहिराई 18 मिटर गहिरो मस्यौदा संग मार्ग जहाज दिनुहुन्छ जो छैन, खोक्रो छ।
नौका क्रिमीआ - काकेशस
यसको संगठनमा निर्णय भन्दा सोभियत संघ द्वारा परियोजना को विफलता पछि लगियो को रेलवे पुल को को पानीको साघुरो भाग मार्फत। 1954 देखि, को पार मा लगातार पानीजहाज shuttled छ। यात्रु को यातायात सानो आकारको डुङ्गा बाहिर। को XX सताब्दी को 70-एँ बीचबाट तिनीहरूले द्वारा कार्गो जहाज icebreaker प्रतिस्थापित थिए।
हाल, लाइन "क्रिमीआ - काकेशस" चार घण्टा शटल नौका। "Protoporos 4" र "विजय" ठूलो जहाजहरु छन् र बोर्ड मान्छे र 1200-1500 140-200 कार मा लाग्न सक्छ। पानीजहाज "ओलम्पिक" र "क्रिमीआ" समावेश, क्रमशः, 580-700 यात्रु र मोटर गाडी अप गर्न 145 एकाइहरु।
क्षेत्रीय र InterContinental पार
सबैभन्दा लामो मार्गहरू, को पानीजहाज द्वारा हटाउन प्रशान्त क्षेत्रमा छन्। सबैभन्दा लामो (2620 मी) - सिएटल (संयुक्त राज्य अमेरिका) र प्रिन्सरुपर्ट (क्यानाडा) बीच। को रस्सा द्वारा सागर भर नौका। तिनीहरूले माल कार (50 टुक्रा) राखिएका छन् प्रत्येक जो barges, एक नम्बर पुल गर्न सक्नुहुन्छ।
युरोप मा, सबै भन्दा ठूलो Travemunde (जर्मनी) र Hanko (फिनल्यान्ड) मा नौका बंदरगाहों बीच मार्ग हटाउन। यसको लम्बाइ 1018 मी छ। को पार 1975 देखि कार्य गरिएको छ। पहिले नै त्यो समयमा माल कार बढी प्रभावकारी स्थान लागि तीन डेक संग पानीजहाज को परिवहन लागि बनाइएका थिए।
आधारभूत समानान्तर अर्थ। उष्ण कटिबन्धीय र यसको भूगोल उत्तर
पूर्व-स्ट्रोक अवस्था: के?
Rectal स्थानच्युति कस्तो व्यवहार गर्ने?
Hairdressers युमेन, प्रिमियम देखि बजेट विकल्पहरू
करेन Dzhanibekyan। जीवन र अर्मेनियन अभिनेता को कार्य
उत्पादनहरूमा प्रोटीन सामग्रीको तालिका। उच्च प्रोटीन फूड्स